5 amin'ireo Park RV tsara indrindra any Andrefan'i Meksika
by Stuart Webb, mpanoratra mpanoratra amin'ny Travel Travel
Ny torolalana ho an'ny zaridaina RV tsara indrindra any Andrefan'i Meksika
Ny fandefasana ny lalan'i Etazonia ao amin'ny RV dia fomba iray handrafetana ny firenena foana, fa indraindray mila mampihetsi-javatra isika indraindray. Meksika dia lasa toerana malaza kokoa ho an'ny RVers tato anatin'ny taona vitsy miaraka amin'ny fampivoarana ny fotodrafitrasa hahatongavana any amin'ny toerana tokony halehanao. Ny filazana fa raha handeha hidina any Meksika ianao, toerana tsara hanaovana fanatanjahan-tena sasany dia mety ho hita any amin'ny faritra andrefan'i Meksika.
Ho an'ny tanjontsika, ny faritra andrefan'i Meksika dia ahitana ny fanjakana Colima, Jalisco, Michoacán, ary Nayarit. Andeha hojerentsika ny toerana tsara indrindra hipetrahana rehefa mandehandeha any andrefan'i Meksika, eto ny zana-paritra RV ambony any Andrefan'i Mexique.
Tranoben'ny San Jose del Tajo Resort: Guadalajara, Jalisco
Puerto Vallarta dia iray amin'ireo toerana tsara indrindra fitsidihana an'i West Mexico. Darryl Leniuk / Photolirbary / Getty Images
Ity parky malaza RV ity dia napetraka eo ivelan'ny Guadalajara ary manana ny fandraisana azy ho anao. Tsy toy ireo valan-tseranana RV meksikanina, ity iray ity dia malalaka amin'ny tranokalany miisa 200 eo ho eo, 175 izay tonga miaraka amin'ny fihenam-bidy feno ary tsy tokony hiahiahy momba ny adapters satria ity valan-tseranam-paritra ity dia mitondra herinaratra 30-ampiana. Ho an'ny trano fivoahana, manana efitra fandroana, orana sy fanasan-damba ianao, ary koa pisinà kiddie, toeram-pisakafoanana, ary efitrano fitahirizana. Mazava ho azy fa iray amin'ireo vala maromaro ao amin'ny faritra.
Ny Guadalajara koa dia nanisy foana ny fandraisany ireo mpitsidika. Ny fisintahany voalohany dia avy amin'ny trano sy ny tranobe manan-tantara, saingy misy karazany hafa koa mahasarika. Ny tranon'ny Instituto Cultural Cabanas izay misy tranom-bakoka sy tranom-bakoka ao an-tokantrano, ny Teatro Degollado sy ny Tempolin'ny Fanafahana, dia mba hanonona anaran'olona vitsivitsy fotsiny ny sasany amin'ireo tranobe malaza ireo. Ireo izay liana amin'ny tantara Amerikana voalohany dia ho tia ny Pyramids Guachimontones ary raha mila zavatra ho an'ny fianakaviana manontolo ianao, andramo ny Zoo Guadalajara na ny Wax Museum. Raha tantara ny lalao dia i Guadalajara no toerana misy anao.
Ity toeram-ponenana ity dia iray amin'ireo tsara indrindra any West Meksikana indrindra, mba hahazoana antoka fa hanome azy io raha toa ka mikasa ny hijanona ao amin'ilay faritra ianao. Ireo tranokala 60 RV dia tonga miaraka amin'ny fihenan-tserasera feno sy ny fidirana amin'ny Wi-Fi. Azonao atao ny manamboatra trano fonenana RV, toy ny toeram-pisakafoanana sy ny fanasan-damba, ankoatra ny toerana hafa misy ny toeram-piantsonana, toy ny lalan-dàlany, dobo, trano fonenana, toerana fitsangatsanganana an-trano ary snack bar. Heck, ho hitanao fa ao amin'ny KOA ianao rehefa mipetraka ao amin'ny Club Roca Azul.
Jalisco dia tsy navotsotry ny zavatra tokony hatao, fa ny karazana teboka eto amin'ity faritra ity. Azonao atao ny miala sasatra any amin'ny toeram-pitsangatsanganana rehefa mankafy zava-pisotro sy sakafo avy any an-toerana, na manamboatra lakandranon'i Lake Chapala, renirano lehibe indrindra any Meksika, hitazona ny tongotrao any amin'ny moron-dranomasina na misy rano mahafinaritra. Raha mila trano fivoriana ny zana-pamoloana dia misy toeram-piompiana rano eny akaikin'ny faritra ary raha manana solika ianao dia mila manana Monte Coxala Spa. Mitadiava R & R sasany ao Jocotepec sy Club Roca Azul.
Ity hotely zaridaina sy hotely RV ity dia tsara tarehy tsara tarehy ary tonga miaraka amin'ireo trano sy trano fanatanjahan-tena ilaina ho an'ny fampionona zavakanto. Ao amin'ny tranokalanao, ireo fanalahidna ireo dia ahitana ny fihokusana feno na ampahany, arakaraka ny safidinao. Ny dobo sy ny toeram-pandriana dia voatahiry sy madio ho an'ny fampiasanao ary ny dobo iray dia mampitony anao ambany masoandro masoandro. Tolotra sy fitaovana hafa no misy ny fidirana Wi-Fi, sehatra fampiasana vondron'olona, ​​ary kianja fanaovana tennis, mba hiantsoana vitsivitsy fotsiny.
Ny ankabeazan'ny fialam-boly any Patzcuaro dia hita amin'ny fandehanana manodidina ny tanàna. Ny toerana tena tsara indrindra any Patzcuaro dia ny Plaza Vasco de Quiroga, izay midika ara-bakiteny kokoa ny hoe Plaza Grande. Feno trano fivarotana tsara tarehy, faritra fisakafoanana ary mazava ho azy izany tantara izany. Raha mitady ny traikefa Meksikana tena izy ianao fa tsy hoe fandrika fandriam-pahalemana, dia omeo ny Plaza Grande hanandrana. Ny faritra hafa mahaliana ny faritra dia ahitana an'i Santa Clara del Cobre, tranonkala iray manan-tantara fantatra amin'ny hoe Copper Place sy ny Tranon'ny Patios Elefanta.
Ity valan-javaboary ity dia tonga noho ny tsy fisian'ny toeram-pitsaboana RV azo antoka any amin'ny sisin'ny morontsirak'i Pasifika ao Colima. Valan-tseraserany vaovao izay miorina amin'ny tranonkala efatra fotsiny ihany fa ireo tranokala kosa dia voaravaka amin'ny serivisy fikarakarana feno sy ny safidinao amin'ny kapila elektrika 15, 30 na 50 amp. Misy ihany koa bacho anankiroa samihafa miaraka amin'ny oram-barotra izay manana sehatra mijery any ambony. Ity zaridaina RV ity dia tsara tarehy amin'ny fahatsorany, satria natao ho an'ny RVers RVers izy io ary sarotra be izany. Fiaramanidina goavam-be tany Colima.
Tsy misy ny fanontaniana hoe ny dikany dia natao ho an'ity valan-javaboary ity, hifikitra ny tongotrao ao anaty fasika ary hiala sasatra, raha izany no fialan-tsasatra misy anao dia efa any ianao. Raha mila hetsika sasantsasany ianao dia afaka mitondra fiara mankany Puerto Vallarta eo akaiky, fa ny Coconutz dia te-hanosika anao hiverina, hanana safidy ary hankafizo ny fomba fijery mahafinaritra raha tsy voahodidin'ny mpilatsaka an-tsambo na mpividy mpivarotra, fiadanana fotsiny.
Maro amin'ireo mpandraharaha ao amin'ny Sol Tierra RV Park no kanadianina sy Amerikana mpamerin-jaza saingy misy toerana malalaka ho an'ny rehetra. Ireo tranokala dia novolavolaina tsy ho an'ny camping fotsiny fa ho an'ny RVs manokana ary ny tranokala dia tonga amin'ny herinaratra 30 na 50 mahery azo ampiasaina, ary koa ny rano sy ny fantson-drano. Voamaritsika ve fa ny tranonkala rehetra dia samy manana ny efitra fandraisam-bahiny sy ny efitra fandroana manokana? Ny tranokala ihany koa dia manana toerana fanasan-damba, dobo filomanosana, Wi-Fi fidirana sy efitrano famerenana, ao anatin'ny fiaraha-monina misy ny fiarovana 24/7.
Ny La Penita de Jaltemba sy ny faritra eo an-toerana dia misarika ny saina ho toy ny toeram-pizahantany malaza ary tsy mihoatra noho ny fandraisana azy io koa ianao. Ao amin'ny morontsirak'i Pasifika izy ireo no mitazona ny ankamaroan'ny fialamboliny amin'ny fanatanjahan-tena sporting, snorkeling, dingan-daka sy karazana fialamboly hafa any Pasifika. Azonao atao ny manamarika ny fahatsiarovanao manokana ao amin'ny Splash of Glass na hijerena ny fialan'ny Isla Marietas National Par k. Raha te-hiverina fotsiny ianao dia maka ora fiarakodia iray ahafinaritra ny Nuevo Vallarta Beach tsara tarehy.
Top 5 Meksikana nosy hitsidika
Cinco de Mayo any Meksika
Masoivoho Amerikana sy Consulates ao Meksika
Torohevitra ho an'ny mpivady vehivavy any Meksika
Sakafo Meksikana nentim-paharazana sy mahazatra
Manana ny sambon'ny ankamaroan'ny any Etazonia ve i Arizona?
Torolalana ho an'ny karazana fialamboly samihafa ao amin'ny Serengeti
Ny momba ny Museum Yves Yves Laurent ao Paris
Ny Club Palms Golf ao Mesquite, Nevada
Lisitry ny Belém Tower ao Lisbon: Ny Tari-dalana feno
Tolo-kevitry ny Travel Ethiopia - Inona no tokony ho fantatra alohan'ny handehananao
Ahoana ny fialan-tsasatry ny ankizy mialokaloka (ary haingana indrindra) amin'ny sakafo
The 10 Best Lake Tahoe Hotels 2018
Centre Westgate City - Glendale (manodidina Phoenix) Arizona
Fikambanana mozika velona any San Francisco
Ny fomba fianarana an'i Kung Fu ao amin'ny Tempolin'i Shaolin
Eoropeana Eoropeana ny UNESCO Maneran-tany